Fa maninona no maty haingana be ny bateriko iPhone? Ity ny The Real Fix! - Iphone
Mety tsy azo tohanana ity fitaovana ity
fahasamihafana ara-panahy eo amin'ny ondry sy osy
ny fomba fanomezana wifi amin'ny telefaona hafa
iphone 6 mikatona amin'ny bateria 40 isan-jato
Holazaiko aminao tena maninona no mandeha haingana be ny baterinao iPhone SY ahoana marina ny fanamboarana azy . Hanazava ny fomba hahazoanao aho fiainana bateria lava kokoa avy amin'ny iPhone-nao tsy mahafoy ny asany. Raiso ity teniko ity:
Ny ankamaroan'ny olana momba ny batterie iPhone dia mifandraika amin'ny rindrambaiko.
Hiresaka maromaro izahay Fanamboarana bateria iPhone voaporofo izay nianarako tamin'ny zavatra niainako voalohany tamin'ny iPhones an-jatony raha niasa tamin'ny Apple aho. Ity misy ohatra iray:
Ny iPhone dia manara-maso sy manoratra ny toerana misy anao na aiza na aiza alehanao. Mampiasa izany betsaka ny fiainana bateria.
Taona vitsivitsy lasa izay (ary taorian'ny maro ny olona nitaraina), Apple dia nampiditra faritra vaovao amin'ny toe-javatra nantsoina hoe Bateria . Mampiseho fampahalalana mahasoa vitsivitsy izy io, saingy tsy hanampy anao izany vahaolana na inona na inona. Nanoratra ity lahatsoratra ity aho hanatsarana ny fiainana bateria iOS 13, ary raha mandray ireo sosokevitra ireo ianao, Mampanantena aho fa hihatsara ny fiainanao bateria , na manana iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, na iPhone X.
Vao tsy ela aho no namorona a Lahatsary YouTube mba handeha hiaraka amin'ireo fanamboarana bateria iPhone hazavaiko ato amin'ity lahatsoratra ity. Na aleonao mamaky na mijery, dia hahita fampahalalana tsara mitovy amin'izany ianao ao amin'ireo horonantsary YouTube novakinao tao amin'ity lahatsoratra ity.
Ny tendronay voalohany dia tena goavambe matory ary misy antony iray # 1: Mahavita manao a ny manamboatra Push Mail lehibe fahasamihafana eo amin'ny fiainana bateria an'ny iPhone.
aretina voa ao amin'ny saka fanafody ao an-trano
ny Tena izy Ny antony mahatonga ny iPhone, iPad, na iPod baterinao maty haingana be
Rehefa napetraka ny mailakao Atoseho , midika izany fa mitazona fifandraisana tsy tapaka amin'ny mpizara mailakao ny iPhone mba hahafahan'ny mpizara avy hatrany Atoseho ny mailaka amin'ny iPhone raha vantany vao tonga. Toa tsara, sa tsy izany? Diso.
Nanazava tamiko tamiko toy izao ny manam-pahaizana Apple: Rehefa apetraka ny iPhone, dia manontany tsy tapaka ny mpizara izy hoe: “Misy mail ve? Misy mail ve? Misy mail ve? ”, Ary io fikorianan-drakitra io dia mahatonga ny baterinao hilatsaka haingana be. Ireo mpizara fifanakalozana no tena meloka indrindra, Ny olon-drehetra afaka mandray soa amin'ny fanovana ity toerana ity.
Ahoana ny fanamboarana ny mailaka Push
Mba hamahana ity olana ity dia hanova ny iPhone-nao izahay Atoseho ny maka. Hitahiry fiainana bateria be dia be ianao amin'ny filazanao amin'ny iPhone ny fizahana mailaka vaovao isaky ny 15 minitra fa tsy amin'ny fotoana rehetra. Hizaha mailaka vaovao foana ny iPhoneo isaky ny manokatra ny mailaka mailaka ianao.
Mandeha Fikirana -> Kaonty sy teny miafina -> Makà angona vaovao .
Vonoy Atoseho eo an-tampony.
Mikorisa ambany ary safidio Isaky ny 15 Minitra ambanin'ny fakana sy fanaterana .
Tsindrio ny kaonty mailaka tsirairay ary, raha azo atao, ovay ho fakana sy fanaterana .
Fikirana -> Kaonty sy teny miafina -> Makà angona vaovao
Vonoy ny Push
Apetraho amin'ny 15 minitra ny sary
Hanova kaonty ho Fetch
Manaiky ny ankamaroan'ny olona fa ny fiandrasana minitra vitsy hahatongavan'ny mailaka dia mendrika ny fanatsarana lehibe eo amin'ny bateria iPhone.
Ho fanampin'izay, raha sendra olana ianao amin'ny fampifanarahana fifandraisana na kalandrie eo amin'ny iPhone, Mac, ary ny fitaovana hafa dia zahao ny lahatsoratro hafa antsoina hoe Fa maninona no tsy misy amin'ireo contact-ko ny iPhone, iPad na iPod-ko? Ity ny The Real Fix!
Tsy mamporisika anao aho hamono tanteraka ny Serivisy Toerana.
Hasehoko anao ny serivisy miafina izay mandetika ny baterinao tsy tapaka, ary vonona ny hiloka aho fa mbola tsy naheno ny ankamaroan'izy ireo akory. Mino aho fa ilaina izany ho an'ny ianareo mifidy izay programa sy serivisy afaka miditra amin'ny toerana misy anao, indrindra fa nomena ny fantsona bateria manan-danja SY olan'ny tsiambaratelo manokana izay miaraka amin'ny iPhone-nao, avy hatrany anaty boaty.
Ahoana ny fanamboarana ny serivisy amin'ny toerana
Mandeha Fikirana -> Tsiambaratelo -> Serivisy toerana .
paompy Mizarà ny toerana misy ahy . Raha te-hizara ny toerana misy anao amin'ny fianakavianao sy ny namanao ao amin'ny fampiharana Messages ianao dia avelao izany, fa Mitandrema: Raha misy te hanaraka anao dia izao no hataony.
Mikorisa hatrany amin'ny farany ambany ary tap Serivisy System . Andao hamafana avy hatrany ny eritreritra diso mahazatra: Ny ankamaroan'ireo toe-javatra ireo dia momba ny fandefasana data ny Apple ho an'ny marketing sy fikarohana. Rehefa vonointsika izy ireo dia hitohy hiasa toy ny fanaony hatrany ny iPhone.
Vonoy ny zava-drehetra amin'ny pejy afa-tsy SOS vonjy maika , Tadiavo ny iPhone (mba hahitanao azy raha very) ary Fanamafisana ny fihetsiketsehana sy ny halavirana (raha te hampiasa ny iPhone ho pedometer ianao - raha tsy izany dia vonoy ihany koa izany). Ny iPhone-nao dia hiasa tahaka ny taloha ihany. Mbola hiasa ihany ny kompà ary hifandray amin'ny tilikambo sela ianao, fa tsy izany dia tsy hahazo data momba ny fitondrantenanao i Apple.
paompy Toerana manan-danja . Fantatrao ve fa nanara-maso anao ny iPhone-nao na aiza na aiza mandeha ianao? Azonao an-tsaina ny fihenan-danja be loatra apetraky ny baterinao. Manoro hevitra anao aho mba hamono Toerana manan-danja . paompy hiverina any amin'ny menio System Services lehibe.
Vonoy ao ambaniny ny switch rehetra Fanatsarana ny vokatra . Ireo dia mandefa fampahalalana fotsiny hanampiana an'i Apple hanatsara ny vokatra vokariny, fa tsy hampandeha tsara kokoa ny iPhone-nao.
Mikorisa mankany ambany ary miverina Icon Bar Bar . Amin'izay dia ho fantatrao fa ampiasaina ny toerana misy anao rehefa misy zana-tsipika kely eo akaikin'ny baterinao. Raha mandeha foana io zana-tsipika io dia mety misy zavatra tsy mety. paompy hiverina any amin'ny menio toerana tena Services Services.
Vonoy ny Serivisy misy ny toerana hanaovana fampiharana izay tsy mila fantatrao hoe aiza ianao.
Ny tokony ho fantatrao: Raha mahita zana-tsipìka volomparasy eo akaikin'ny fampiharana ianao dia mampiasa ny toeranao izao. Ny zana-tsipika volondavenona dia midika hoe efa nampiasaina ny toerana misy anao ao anatin'ny 24 ora farany ary ny zana-tsipìka voaravaka volomparasy dia midika hoe mampiasa a geofence (misimisy kokoa momba ny geofences aorian'izay).
Tandremo ny fampiharana misy zana-tsipìka volomparasy na volondavenona eo akaikiny. Mila mahafantatra ny toerana misy anao ve ireo rindranasa ireo? Raha manao izy ireo dia tsara izany - avelao izy ireo. Raha tsy izany dia tsindrio ny anaran'ny fampiharana ary safidio tsy hampijanona ny fampiharana tsy hanary ny baterinao tsy ilaina.
Vonoy ny serivisy System
Vonoy ireo toerana manan-danja
Vonoy ireo fampiharana tsy ilaina
Teny momba ny geofencing
ny geofence dia perimeter virtoaly manodidina ny toerana iray. Fampiasa apps geofencing handefa fanairana anao rehefa tonga na miala amin'ny toerana itodiana ianao. Hevitra tsara izany, fa raha te hiasa geofencing, ny iPhone-nao dia tsy maintsy mampiasa GPS tsy tapaka hanontany hoe: 'Aiza aho? Aiza aho? Aiza aho?'
Tsy mamporisika anao hampiasa fampiharana izay mampiasa geofencing na fanairana mifototra amin'ny toerana noho ny isan'ny tranga hitako izay tsy nahafahan'ny olona namita azy tontolo andro nefa tsy nila namidy ny iPhone -ian'izy ireo - ary ny geofencing no antony.
3. Aza mandefa iPhone Analytics (Diagnostics & Usage Data)
Ity misy haingana: Mandehana mankany Fikirana -> Tsiambaratelo , horosohy mankany ambany, ary sokafy Analytics . Vonoy ny switch eo akaikin'ny Share iPhone Analytics ary zarao ny iCloud Analytics mba hampijanonana ny iPhone tsy handefa data ho azy amin'ny Apple momba ny fomba fampiasanao ny iPhone.
4. Akatona ny fampiharana anao
Indray mandeha isan'andro na roa, tsara ny manakatona ny fampiharana anao. Ao amin'ny tontolo tonga lafatra dia tsy mila manao an'izany mihitsy ianao ary ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny Apple dia tsy hiteny mihitsy hoe tokony hanao izany ianao. Fa ny tontolon'ny iPhones dia tsy tonga lafatra - raha nisy dia tsy namaky ity lahatsoratra ity ianao.
Moa tsy mihidy ny Apps Rehefa miverina amin'ny efijery an-trano aho?
Tsia, tsy manao izany izy ireo. Tokony hiditra a nahantona modely ary tazomy ho fahatsiarovana ka rehefa manokatra azy ireo indray ianao dia mandray eo amin'izay nijanonanao. Tsy miaina ao amin'ny iPhone Utopia izahay: zava-misy fa misy bibikely ny rindrambaiko.
Betsaka ny olana momba ny fantsom-batsy mitranga rehefa misy fampiharana noheverina manidy, fa tsy manao. Fa kosa, ny app dia mianjera any ambadika sy ny batterieo iPhone hialana tsy fantatrao akory.
Ny rindranasa fianjerana dia mety hahatonga ny iPhone hafana koa. Raha izany no mitranga aminao dia zahao ny lahatsoratro nantsoina Fa maninona no mafana ny iPhone-ko? mba hahitana hoe maninona ary amboary tsara.
Ahoana no hanakatonana ny fampiharana anao
Kitiho indroa ny bokotra Home ary ho hitanao ny iPhone app switch . Ny switch app dia ahafahanao mahita ireo rindranasa rehetra voatahiry ao amin'ny fahatsiarovanao ny iPhone-nao. Mikaroha ny lisitra, tsindrio ny rantsan-tànanao ankavia na havanana. Miloka aho fa ho gaga ianao firy ny app misokatra!
Raha hikatona fampiharana dia ampiasao ny rantsan-tànanao hikisaka amin'ilay rindranasa ary esory eo an-tampon'ny efijery. Izao dia efa tena nakatona ny fampiharana ary tsy afaka mamoaka ny baterinao any aoriana izy. Manidy ny fampiharana anao tsy mamafa ny tahirin-kevitra na miteraka voka-dratsy - tsy afaka manampy anao hanana fiainana bateria tsaratsara kokoa fotsiny izany.
Swipe ankavia sy havanana hahitana fampiharana misokatra
Atsaharo ny tampon'ny efijery mba hampikatona ny fampiharana
Ahoana no ahalalako fa nianjera tamin'ny iPhone ny rindrambaiko? Toa milamina daholo!
Raha mila porofo ianao, mankanesa any Fikirana -> Tsiambaratelo -> Analytics -> Data Analytics . Io dia tsy voatery zavatra ratsy raha misy fampiharana voatanisa eto, fa raha mahita fampidirana betsaka ho an'ny fampiharana mitovy na fampiharana voatanisa eo ambany ianao LatestCrash , mety manana olana amin'ny fampiharana ianao.
Ny adihevitra fanakatonana ny app
Vao tsy ela izay, nahita lahatsoratra aho izay milaza fa ny fanidiana ny fampiharana anao dia tena izy mampidi-doza amin'ny fiainana bateria iPhone. Niantso ny lahatsoratro Hevitra ratsy ve ny fanidiana Apps iPhone? Tsia, ary izao no antony. manazava ny lafiny roa amin'ny tantara, ary ny antony manidy ny fampiharana marina anao dia hevitra tsara rehefa mijery ny sary lehibe ianao.
5. Fampandrenesana: Ampiasao ihany ireo ilainao
Fampandrenesana: OK sa Aza avela?
Efa nahita ny fanontaniana teo aloha daholo isika rehefa manokatra rindranasa voalohany: ' App Te handefa anao fampandrenesana manosika anao ', ary misafidy izahay ok na Aza avela . Vitsy ny olona mahatsapa tena zava-dehibe fitandremana ny amin'ny fampiharana izay lazainao fa OK.
Rehefa mamela fampiharana iray handefa anao Push Notifications ianao dia manome alalana an'io fampiharana io hihazakazaka hatrany aoriany ka raha misy zavatra manjo anao (toa ny fandraisana hafatra an-tsoratra na ny ekipa tianao indrindra mandresy lalao), izany fampiharana izany afaka mandefa fanairana anao hampahafantatra anao.
Tsara ny fampandrenesana, saingy Aza mandao ny fiainana bateria. Mila ampandrenesina isika rehefa mahazo hafatra an-tsoratra, saingy ilaina izany antsika misafidy izay fampiharana hafa avela handefa fampandrenesana ho anay.
Fikirana -> Fampandrenesana
Ahoana no manamboatra fampandrenesana
Mandeha Fikirana -> Fampandrenesana ary ho hitanao ny lisitry ny rindranasao rehetra. Eo ambanin'ny anaran'ny fampiharana tsirairay dia ho hitanao izany eny na ny karazana fampandrenesana avela handefa anao ny fampiharana: Badges, Feo, na Baniera . Aza miraharaha ireo fampiharana milaza eny ary jereo ny lisitra. Rehefa mandeha ianao dia apetraho amin'ny tenanao ity fanontaniana ity: 'Mila mahazo fampandrenesana avy amin'ity rindrambaiko ity ve aho rehefa tsy misokatra?'
iphone hotspot dia tsy afaka mifandray amin'ity tambajotra ity
Raha eny ny valiny dia avelao ho toy izao ny zava-drehetra. Tena tsara ny mamela ny fampiharana sasany hampandre anao. Raha tsia ny valiny, dia tsara ny mamono fampandrenesana ho an'io fampiharana io.
Raha hamono ny fampandrenesana dia kitiho ny anaran'ny fampiharana ary vonoy eo akaikiny ny switch Avelao ny fampandrenesana . Misy safidy hafa koa eto, fa tsy misy fiantraikany amin'ny androm-batterin'ny iPhone. Tsy maninona raha tsy misy ny fampandrenesana na tsia.
Novonoina ny fampandrenesana
6. Vonoy ireo Widget izay tsy ampiasainao
Ny Widgets dia 'mini-apps' kely izay mihazakazaka ao ambadiky ny iPhone hahafahanao miditra mora amin'ny fampahalalana vaovao avy amin'ireo fampiharana tianao indrindra. Rehefa mandeha ny fotoana dia hamonjy bateria be dia be ianao amin'ny famonoana ireo widgets izay tsy ampiasainao. Raha tsy ampiasainao mihintsy, tsy maninona ny mamono azy rehetra.
Midira amin'ny widgets anao, kitiho ny bokotra Home handeha amin'ny efijery Fandraisana an-tranonao iPhone ary swipe avy ankavia miankavanana mandra-pahatonganao any amin'ireo widgets. Avy eo, mikorisa midina ary kitiho ilay boribory Ovay bokotra Ho hitanao eto ny lisitr'ireo widgets azonao ampiana na esorina amin'ny iPhone-nao. Mba hanesorana widget iray dia kitiho ankavia ny bokotra minus mena.
7. Vonoy indray mandeha isan-kerinandro ny telefaoninao (Ny làlana tsara)
Soso-kevitra kely izy nefa manan-danja ihany koa: Ny famonoana ny iPhone sy fiverenanao indray mandeha indray mandeha isan-kerinandro dia afaka mamaha ny olana miafina amin'ny bateria miafina izay manangona fotoana. Tsy hilaza aminao mihitsy i Apple fa satria amin'ny iPhone Utopia, tsy ho izany.
Amin'ny tontolo tena izy, ny famafana ny iPhone-nao dia afaka manampy amin'ny famahana olana amin'ny apps izay nianjera na olana ara-teknika hafa mety hitranga rehefa misy efa hatry ny ela ny solosaina.
Teny fampitandremana: Aza tazomy ny bokotra herinaratra sy ny bokotra an-trano miaraka amin'izay hanidiana ny iPhone. Io dia antsoina hoe 'reset mafy', ary tokony ampiasaina raha tsy ilaina tanteraka. Izy io dia mitovy amin'ny famonoana solosaina birao amin'ny alàlan'ny famongorana ny plug avy amin'ny rindrina.
Ahoana ny fomba hamonoana ny iPhone (The TSARA Làlana)
Mba hamonoana ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pisehoan'ny 'slide to power off'. Alefaso amin'ny rantsan-tànanao ny kisary momba ny herinaratra boribory ary andraso rehefa mikatona ny iPhone. Ara-dalàna raha maharitra segondra maromaro ny fizotrany. Avy eo, avereno indray ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanindriana sy ny fitazonana ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny fisehoan'ny Apple logo.
Famerenana ny rindrambaiko App Refresh
Ny fampiharana sasany amin'ny iPhone dia avela hampiasa ny Wi-Fi na ny angona findainao hampidinana atiny vaovao na dia tsy ampiasainao aza. Azonao atao ny mitahiry androm-piainana be dia be (sy ny sasany amin'ireo drafitry ny angonao) amin'ny famerana ny isan'ny fampiharana avela hampiasa an'io endri-javatra antsoin'ny Apple hoe Background App Refresh io.
Ahoana ny fanamboarana ny fanavaozana ny app
Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Fanavaozana ny App Background . Eo an-tampony, ho hitanao ny switch switch iray izay manidy tanteraka ny Background App Refresh. Tsy manoro hevitra anao aho hanao izany, satria Background App Refresh afaka ho zavatra tsara ho an'ny fampiharana sasany. Raha toa ahy ianao dia ho afaka hamono saika ny fampiharana rehetra ao amin'ilay lisitra.
Rehefa mamakivaky ny fampiharana tsirairay ianao dia manontania tena hoe: “Tiako ve ity fampiharana ity hahafahanao misintona fampahalalana vaovao na dia izaho aza tsy mampiasa azy io? ” Raha eny ny valiny, avelao ny Background App Refresh alefa. Raha tsy izany dia vonoy izany ary hitahiry fiainana bateria bebe kokoa ianao isaky ny manao izany.
9. Tazomy ny iPhone
Araka ny filazan'ny Apple, ny iPhone, iPad, ary iPod dia natao hiasa hatramin'ny 32 degre hatramin'ny 95 degre fahrenheit (0 degre ka hatramin'ny 35 degrees celsius). Ny tsy lazain'izy ireo aminao foana dia ny fampisehoana ny iPhone amin'ny maripana mihoatra ny 95 degre fahrenheit mety hanimba maharitra ny baterinao.
Raha andro mafana izao ary handeha hitsangatsangana ianao dia aza manahy izany - milamina ianao. Ny resahintsika eto dia maharitra maharitra amin'ny hafanana be loatra. Moralin'ny tantara: Toy ny alikanao ihany, aza avela ao anaty fiara mafana ny iPhone-nao. (Fa raha tsy maintsy misafidy ianao dia vonjeo ny alika).
Mety hanimba ny batteriko iPhone ve ny toetrandro mangatsiaka?
Ny mari-pana ambany dia tsy hanimba ny baterinao iPhone, fa misy zavatra no hitranga: Arakaraka ny maha-mangatsiaka azy, no mampidina ny haavon'ny baterinao. Raha mihena ny mari-pana dia mety hijanona tsy hiasa tanteraka ny iPhone-nao fa rehefa miakatra indray ny hafanana dia tokony hiverina amin'ny laoniny ny haavon'ny iPhone sy ny baterinao.
10. Ataovy azo antoka fa hohidiana ny hidy-mandeha ho azy
Fomba iray haingana hisorohana ny fivoahan'ny bateria iPhone amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fahazoana antoka fa nirina ny hidim-baravarana. Sokafy ny fampiharana Settings ary tap Fampisehoana sy famirapiratana -> Auto-Lock . Avy eo, mifidiana safidy hafa ankoatry ny Never! Io no fotoana azonao avela handao ny iPhone alohan'ny hamonoana ny seho ary handeha amin'ny fomba torimaso.
11. Atsaharo ny effets Visual tsy ilaina
iPhones dia tsara tarehy, manomboka amin'ny hardware ka hatramin'ny rindrambaiko. Azontsika tsara ny hevitra fototra momba ny fanamboarana ireo singa fitaovana, fa inona kosa no mamela ny rindrambaiko haneho sary tsara tarehy toy izany? Ao anatin'ny iPhone misy anao, fitaovana kely iray natsangana tao anaty tabilao lojika antsoina hoe Unit Graphics Processing Unit (na GPU) no manome ny iPhone hery hampiseho ny vokany tsara hita maso.
Ny olana amin'ny GPU dia satria noana mafy foana izy ireo. Arakaraka ny maha fancier ny effets visuels no mahafaty ny bateria haingana kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tsiranoka amin'ny GPU an'ny iPhone anao, dia azonay atao tsara ny mampitombo ny ain'ny baterinao. Hatramin'ny namoahana ny iOS 12 dia azonao atao ny manatanteraka ny zavatra rehetra nanolorako hevitra tamina torohevitra vitsivitsy vitsivitsy tamin'ny fanovana toerana iray amin'ny toerana mety tsy noeritreretinao hojerena.
iphone x tsy hikatona
Mandeha Fikirana -> Azo idirana -> Fihetsiketsehana -> Ahena ny fihetsehana ary paompy ny switch mba hampodina azy.
Ankoatry ny valin'ny valin'ny rindrina parallax amin'ny efijery an-trano dia mety tsy ho hitanao izany misy ny fahasamihafana ary hamonjy bateria be dia be ianao.
12. Alefaso ny famahana bateria nohavaozina
Ny famandrihana bateria voaatsara dia mamela ny iPhone hianatra momba ny fahazaran-dratsinao hampihenana ny fahanteran'ny bateria. Manoro hevitra izahay ny hamadika ity toerana ity hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny bateria iPhone mandritra ny fotoana maharitra.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Battery -> fahasalaman'ny bateria . Avy eo, alefa ny switch eo akaikin'ny Optimize Battery Charging.
13. DFU Ampodio & Ampodio avy amin'ny iCloud, fa tsy iTunes
Amin'izao fotoana izao dia niandry iray na roa andro ianao ary mbola tsy nihatsara ny fiainanao bateria. Tonga ny fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone . Manoro hevitra izahay manao famerenana amin'ny laoniny DFU . Rehefa vita ny famerenana amin'ny laoniny dia mamporisika anao izahay hamerina amin'ny laoniny avy amin'ny iCloud backup raha azonao atao.
Aleo hazava aho: Eny, mila mampiasa iTunes ianao hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone - tsy misy fomba hafa. Izahay dia miresaka momba ny fomba famerenanao ny data-nao hiverina amin'ny iPhone-nao rehefa naverina amin'ny toeran'ny orinasa io.
Misavoritaka momba ny marina ny olona sasany rahoviana azo antoka ny mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainanao. Raha vantany vao mahita ny efijery 'Hello' amin'ny iPhone na 'Set Up your iPhone' ao amin'ny iTunes dia azo antoka tanteraka ny manapaka ny iPhone-nao.
Avy eo, ampiasao ny menus amin'ny telefaonao hifandraisanao amin'ny Wi-Fi sy hamerenana amin'ny laoniny ny backup iCloud anao. Raha nanana olana tamin'ny famerenana ny iCloud sy indrindra raha lany tahiry ianao, zahao ny lahatsoratro izay momba izany rehetra izany ny fomba fanamboarana iCloud backup.
Moa ve tsy mitovy ny backup sy ny backup amin'ny iCloud?
Eny, iCloud backups ary iTunes backups Aza mirakitra votoaty mitovy amin'izany. Ny antony anolorako hevitra hampiasa iCloud dia ny fandraisanao ny solosainanao sy ny olana mety hitranga tsy misy sary.
Tsy ratsy daholo. Hanampy ny iCloud sy ny kaonty mailakao amin'ny iPhone ianao rehefa manamboatra azy. Ny fifandraisanao, ny kalandrie, ny naoty, ny fampahatsiahivana ary ny tsoratadidy dia voatahiry ao amin'ireo kaonty ireo, ka tokony hiverina eo daholo ireo fampahalalana ireo.
Inona ianao dia tsy maintsy atao dia ny mampidina ny rindranasao, manamboatra Wi-Fi sy ny toerana hafa ary mamindra ny sarinao sy ny mozikao amin'ny iPhone-nao. Io dia tsy fa asa be, fa mitaky fotoana kely vao averina amin'ny laoninao ny zavatra rehetra araka ny itiavanao azy.
ny apps-ko tsy mitsahatra nianjera tamin'ny iphone-ko
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone amin'ny sehatry ny ozinina, sokafy Fikirana -> Ankapobeny -> Famerenana -> Fafao ny atiny sy ny fikirana rehetra . Ampidiro ny passcode anao, avy eo tap Fafao ny iPhone hanamarina ny fanapaha-kevitrao.
15. Mety hanana olana amin'ny hardware ianao (Fa mety tsy ny batery)
Tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity dia nilaza aho fa ny ankamaroan'ny olana mifandraika amin'ny fiainana bateria iPhone dia avy amin'ny rindrambaiko, ary tena marina izany. Misy tranga vitsivitsy izay olan'ny hardware afaka miteraka olana, fa saika amin'ny tranga rehetra tsy ny bateria no olana.
Ny fitetezana sy ny famafazana dia mety hiteraka fahasimbana amin'ireo singa anatiny izay tafiditra amin'ny famandrihana na fitazonana ny fiampangana amin'ny iPhone. Ny bateria dia namboarina mba ho mahazaka tsara, satria raha totofana izy io dia mety hipoaka ara-bakiteny.
Ny fitsapana bateria Apple Store
Rehefa entinao any amin'ny Apple Store ny iPhone-nao mba hotompoina dia mihazakazaka diagnostika haingana ny Apple techs izay manambara fampahalalana marobe momba ny fahasalamana ankapobeny amin'ny iPhone. Ny iray amin'ireto diagnostika ireto dia fitsapana bateria, ary mandalo / tsy mahomby. Nandritra ny androko rehetra tao amin'ny Apple, mino aho fa nahita iPhones roa miaraka amin'ny bateria izay tsy nandalo izany fitsapana izany - ary nahita aho betsaka an'ny iPhones.
Raha mandalo ny fitsapana bateria ny iPhone anao, ary misy vintana 99% hitranga, dia hanao izany i Apple tsy soloina ny baterinao na dia eo ambany fiantohana aza ianao. Raha mbola tsy nandray ny dingana nolazaiko tamin'ity lahatsoratra ity ianao dia halefan'izy ireo hody. Raha ianao eFA nanao izay narosoko dia afaka miteny ianao hoe: 'Efa nanandrana izany aho, ary tsy nety.'
Raha tena te hanolo ny baterinao ianao
Raha ianao azo antoka manana olana amin'ny bateria ianao ary mitady serivisy fanoloana bateria lafo vidy kokoa noho i Apple, dia manoro hevitra anao aho hanin-kotrana , serivisy fanamboarana izay ho tonga aminao any an-tranonao na any amin'ny biraonao ary hanolo ny baterinao mandritra ny fiandrasanao, ao anatin'ny 30 minitra.
Manantena aho fa nahafinaritra anao ny namaky sy nianatra tamin'ity lahatsoratra ity. Asan'ny fitiavana ny fanoratana azy, ary feno fankasitrahana aho amin'ny olona tsirairay mamaky azy ary mamindra izany amin'ny namany. Raha tianao izany dia avelao ny fanehoan-kevitra etsy ambany - Te-hihaino anao aho.